आफ्नो औंला मा एक विद्रधि: परम्परागत र लोक विधिहरू को उपचार
तीव्र को purulent सुनिंनु औँला मा ऊतक एक "felon" भनिन्छ। विद्रधि भङ्ग छाला वा शरीर श्लेम लाग्एको झिल्ली मार्फत pyogenic जीवाणुहरु संग सम्पर्क मा विकास। यो Tissues मा पीप सीमित संग्रह गर्न जान्छ। केही अवस्थामा, आफ्नो औंला मा एक विद्रधि रोगहरु को एक उलझन हुन सक्छ। purulent सुनिंनु गुहा को विकास कहिलेकाहीं एक भडकाऊ प्रक्रिया जान्छ lymphatics। यो पीडादायी रातो स्ट्रिप्स र आसन्न लसीका नोड्स को आकार वृद्धि को छाला को उपस्थिति मा व्यक्त गरिएको छ।
रोग को पहिलो फैलन उहाँको औंला मा एक विद्रधि छ मा limb बाँकी प्रदान गर्नुपर्छ जब। उपचार डाक्टर द्वारा निर्धारित गरिनु पर्दछ। तथापि, तपाईं आफ्नै केही कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ। यो यस सुनिंनु र sepsis थप प्रसार गर्न सक्छ, फोडा थिच्नुहोस् गर्न, र यो मालिश RUB आवश्यक छ।
उपचार abscesses मुख्यतया आयोजित र ओपरेटिव antiinflammatory, जीवाणुरोधी उपचार प्रयोग गरेर। यो केन्द्र खोल्न र एक गहन reorganization सञ्चालन गर्न मदत गर्छ। सर्जिकल हस्तक्षेप स्थानीय एनेस्थेसिया प्रयोग गरेर र लगभग 10-40 मिनेट लिन्छ छ। असाधारण अवस्थामा, पूर्ण विश्राम र रोगी को शान्तसगं लागि नसों शान्तसगं प्रयोग गर्नुहोस्। दुई ड्रेसिङ आयोजित पछि, र त्यसपछि त्यहाँ एउटा विद्रधि छ जहाँ क्षेत्र, को पूर्ण शुद्धीकरण सम्म एक दिनमा एक पटक। उपचार थप जीवाणुरोधी, antiinflammatory nanodiamonds उपयोग गरदै लागू मा हुन्छन्।
तर, केही अवस्थामा, यो आफ्नो औंला मा एक विद्रधि जस्तै यस्तो समस्या सामना गर्न परम्परागत चिकित्सा प्रयोग गर्न पर्याप्त छ। यस मामला मा उपचार disinfection पूरा गर्न र पीप पूरा जल लागि उपाय अपनाउने छ।
सुरुमा सोडा स्नान गर्नु पर्छ। न्यानो पानी एक गिलास यो गर्न बेकिंग सोडा को दुई चम्मच र आयोडिन केही घटेको थप्नुहोस्। पानी दुखेको औंठी छोड्नु। बारेमा पाँच मिनेट हुनुपर्छ समाधान जस्तै यो राख्नुहोस्। घटना पछि, मा विद्रधि मा एक निस्संक्रामक प्रभाव छ उनको औंला, उपचार फरक प्रयोग हुनेछ जडीबुटी, tinctures, मलहम।
विभिन्न स्रोतबाट औँला निम्न उपाय परिसमापन सुनिंनु ध्यान सुझाव।
लागि थप तीव्र परिपक्वता विद्रधि2को एक अनुपात मा धनुष र साबुन पीसने गर्नुपर्छ: 1। त्यसपछि, दुखेको ठाउँ मा परिणामस्वरूप slurry समाधान गर्न एक बाँझ पट्टी र प्याच प्रयोग गरेर। हरेक दिन पट्टी परिवर्तन गर्नुहोस्।
राम्रो खोल्छ sores पाउडर clamshell। साथै, मह र सेतो पीठो बनेको केक पनि आफ्नो औंला मा एक विद्रधि खोल्न अनुमति दिन्छ। उपचार दस घण्टामा भडकाऊ ध्यान सामना गर्न मद्दत गर्छ।
तर, यो घर त्यो उपचार, विभिन्न जटिलताहरू गर्न सक्छ सम्झना गर्नुपर्छ चिकित्सा हस्तक्षेप बिना। तसर्थ, लोक उपचार को प्रयोग केवल एक भडकाऊ प्रक्रिया प्रारम्भिक चरणमा अनुज्ञेय छ। घटनाको कुनै पनि आशङ्का felon, राम्रो परिणाम सर्जन एक समसामयिक यात्रा प्रदान गर्न सक्छन्। यसबाहेक, प्रारम्भिक चरणमा उसलाई संकेत गर्दा अक्सर सम्भव एक पर्याप्त विरोधी भडकाऊ उपचार गर्न छ।
को कलाई मा शंकु। यो सामान्य हो वा होइन?
Chlamydia जोर्नीशोथ: लक्षण, कारण, प्रकार र उपचार
Eosinophils बच्चा मा उच्च छन्: कारण लागि देख
तल्लो limbs को Paresthesia
साइन्स, लक्षण र तीव्र pancreatitis को उपचार
ठोस पदार्थ शिशुहरू परिचय गर्दा यो ठीक छ कि
बैग, ड्रम मा आलु कसरी बढ्न? को बालकनी मा आलु क्षेत्र
सुन्दर ग्रीस: Cassandra र यसको आकर्षण
स्वतन्त्र filmmaker Dzho Karnahan। Filmography
चुनिएको को शब्द राइम रूपमा "मान्छे"
म एक दन्त चिकित्सक देखि एचआईभी प्राप्त गर्न सक्छन्? दन्त चिकित्सा मा एचआईभी रोकथाम
रूटर ASUS RT-N11P को अवलोकन: वर्णन, कैरेक्टराइजेशन, सेटिङ र प्रतिक्रिया
पारिस्थितिकी प्रचार टोली: परिदृश्य। पारिस्थितिकी परी कथा। पृथ्वीको बासिन्दाको पारिस्थितिकी कोड
कसरी बैंक कार्ड मार्फत "Tele2" मा पैसा राख्न? सुझाव र चाल
तपाईं COP भङ्ग भने, के गर्ने?